MDC-T Yopikisa Huwandu hweMapurisa Anovhota
HARARE — Kuvhota kwemazuva maviri kwemapurisa, masoja pamwe nevashandi vekomisheni inowona nezvekufambiswa kwesarudzo, ye Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, kwapinda muzuva rekupedzisira neMuvhuro zvinhu zvakangoita manyama amire nerongo munzvimbo dzakakwanda munyika.
ZEC yatadza zvakare kuendesa mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzanga dzichivhoterwa nemapurisa nemasoja pamwe nevashandi vekomisheni iyi avo vari kukurumidza kuvhota pamberi pesarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru sezvo vachange vasiri munzvimbo dzavanogara.
Zvinonzi mapepa ekuvhotesa ku Mazowe apera mushure mekunge kwangovhota vanhu vatanhatu chete vamwe vakapedza zuva rose vamire mumutstetse wekuvhota.
Ku Masvingo, uko kusina kuvhotwa neSvondo, mapepa ekuvhotesa anonzi asvika zuva rorova nhongonya.
Mapapepa aya anonzi anga ari mashoma zvakare muHarare izvo zvaita kuti vanhu vazhinji vaswere vakamira mumitsetse vakamirira kuvhota sezvo mapepa aya anga ari mashoma.
Zvinonziwo munzvimbo dzakawanda dzanga dzichivhoterwa pazopedzisira poshandiswa mapepa ane mazita evanhu akaita zvekunyorerwa kuti ndivo vanhu vane mvumo yekuvhota.
Ku Lupane, zvinonzi vamwe vanhu vanga vachida kuvhota vatadza sezvo mapepa ekuvhotesa anga asati asvika zvapedzisira zvaita kuti vadzokere kudzimba.
Sangano rinoongorora mafambisirwo esarudzo, re Zimbabwe Election Support Network, ZESN, rinoti harisi kufara nemafambisirwo aitwa kuvhota uku.
Sachigaro weZESN, VaSolomon Zwana, vanoti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka zvakonzera zvakare kuti vanhu vazhinji vasakwanise kuvhota musarudzo dzemazuva maviri idzi.
VaZwana vanoti kutadza kwaita ZEC kufambisa basa zvakanaka mukuvhota kwevanobvumirwa nemutemo kuti vakurumidze kuvhota kunoburitsa pachena kuti sarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru dzinogona kutadza kufamba zvakanaka sezvo pasina gadziriro yakakwana.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZEC, Amai Rita Makarau, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vachinzi vari mumusangano.
Zvichakadai, nyaya yakakwidzwa kudare nemutevedzeri wasachigaro weMDC-T, VaMorgan Komichi, kudare repamusoro yekuti kukurumidza kuvhota uku kumbomiswa nepamusana pekuti mapurisa akakumbira kukurumidza kuvhota pamberi pesarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru akawandisa kudarika mapurisa ari munyika yanzi ichanzwikwa neChitatu.
Gweta raVaKomichi, Va Lewis Uriri, vanoti pane kutaurirana kuripo kusati kwave kukodzera kupinda munzeve dzeveruzhinji.
MDC-T inoti iyi inogona kunge iri imwe yenzira dzingangoshandiswa neZanu PF mukubira musarudzo.
Asi ZEC inoti inovimba kuti vanhu vakakumbirirwa nemukuru wemapurisa, Va Augustine Chihuri, kuti vakurumidze kuvhota, mapurisa vose.